Yeka indlela entle ngayo le migca, akunjalo: "Hayi, Romeo, Romeo othandekayo"? Ayaziwa isizathu sokuba iqhawe likaShakespeare livakalisa iimvakalelo zakhe ngokukrakra, mhlawumbi ngenxa yokuba usemncinci, okanye ukuba uvakalelo lwakhe luyammisa ngokuphindaphindiweyo imihla ngemihla.
Wonke umfazi ehlabathini ufuna umnqweno wakhe amxelele amagama athandekayo rhoqo. Kufanelekile ukuba umntu athethe ibinzana elithi "mhle, othandekayo, othandekayo nothando", njengokuba umfazi uncibilika njengengqayi yamanzi entwasahlobo, ezandleni zakhe. Nangona kunjalo abafazi banomdla ngakumbi nangona kutheni engathethi oku "Ndiyamthanda".
Ekuphenduleni umbuzo: "Ngaba uyandithanda," wathetha into engaxhomekanga kuye kwaye waqhubeka nokuphishekela ishishini lakhe. Masizame ukuqonda le ngxaki. Okanye mhlawumbi nje abantu banalo ulwimi lwabo, bayibize ngokuthi "yindoda"?
Yithetha impendulo: uyayithanda okanye akunjalo?
Abathandekayo bethu banjengezigumbane: phawula, akaze athethe ngeengxaki zakhe ade afinyelele kwindawo yokubilisa. Yaye amazwi omthandayo? Ziyabantu njengemigibe - yitsho nje, kwaye sele isithembiso-esithembisile, kwakukho ukunqanyulwa - yonke into ayiphumelekanga, kwaye awufuni ukubonakala ngathi ungumkhulumi. Apha bathula.
Uthandayo, kodwa uthe cwaka?
Kwilizwe lethu lanamhlanje, umfazi uhlala ngumfazi, nangona ayenayo nje umgcini wekhaya, kodwa naye ungumgcini wesondlo. Kodwa ngamanye amaxesha isiqingatha esinyanisekileyo somntu sikhohliwe malunga nendawo yokuqala yokuya kuyo kwaye ke iingxaki ziqala. Ukuze ukwazi ukuthandwa, kwaye ewe ukuthetha ngale nto, ubuncinane kanye emva kweeveki ezintathu kufuneka uzithande. Ewe, mthande, mnyamekele, uze ufumane indawo engafanelekanga kwifowuni kwaye kungabikho ukuvuma okufudumeleyo, yintoni na?
Inyaniso yokuba indoda ibeka kwingcamango ndiyithanda nje amazwi anothando, ekhankanywe kuphela ngomsebenzi wokusebenza: "Ndiyathembisa ukukunceda kuzo zonke izinto, ndiya kukunyamekela, ndiya kuzinyamezela izihlobo zakho." Masingakulibali ukuba amaqhawe exesha lethu, kunzima ukuqaphela nayiphi na imvakalelo. Emva koko, babeka ingcamango yabo kubo: "Andiyi kuze ndikunikele, ningatshintshi." Bayaqonda ukuba xa bengayigcinanga ilizwi labo, baya kubaphatha kakubi abo banomdla ngabo. Kodwa into ebalulekileyo kakhulu kukuba amadoda ngokwawo akayi kulungela kuwo njengoko abonakala, ngenxa yokuba baya kulahlekelwa idumela labo, baya kuwa phantsi kwamehlo ebhinqa. Ngoko ke kufuneka ndiyenze ntoni? Sithe cwaka, ngoko siya kwenza ngaphandle kwamaxhoba kumacala omabini.
Yaye ngubani ovuyayo? Pupa okanye umfazi?
Ngokuqhelekileyo sifumana ama-comedies aseMelika kwaye sibone indlela umtsalane wakhe onika ngayo isipho esixabisekileyo, ngaloo ndlela abonisa uthando lwakhe. Ngako-ke amaqhinga akhula kwiingcinga zabasetyhini: ukuba uyayithanda, ngoko uya kundinika izipho ezibiza. Kodwa ngaba kunjalo?
Khawucinge ngolu hlobo, sithetha ngokuthe tye, siya kugcina: amabhinqa amabini, omnye udibana nomntu onomvuzo ohloniphekileyo, kunye nomnye umlinganiselo ongaphantsi. Umntu wokuqala ucela into yakhe ethandekayo into, nantoni na, eqala ngesikhwama esivela ePrada kunye nokuphela kwesigxobo se-diamond sikaTiffany, kodwa unzima kakhulu, njengokuthi isipho sisithi kuye: "Unetyala." Omnye uzisa isiqhamo seentyatyambo ngomhla kwaye ulungisa izidlo zothando, kodwa uphatha umfazi onengqiqo, engafuneki nto. Yaye ngubani ovuyayo? Pupa okanye umfazi?
Ngokuqinisekileyo, ndifuna ukufisa wonke umntu wesifazana kule hlabathi ukuba afune umntu onobuqilileyo, omhle, onenkathalo, nococekileyo. Kodwa ubomi buyinto endiyolisayo. Masibe nesigqibo: akunandaba nokuba isipho siza kuhlawula njani, into eyona nto kukuba uya kunika uphawu, kwaye le yinye igama endiyithandayo, kuphela kwilwimi "yindoda". Khumbula, ukuba indoda yakho ethandekayo ikhawuleza ukusuka emsebenzini, yinqumle intlanganiso ebalulekileyo kuphela ngenxa yokuba inja oyithandayo iyagula, kwaye xa ehamba kwintengiso, ubiza amahlanu ngamaxesha - unokuzibuza ukuba kutheni. Mhlawumbi amagama aya kuba luleke kangaka?
Namhlanje wambona kwakhona, kwaye akazange akushiye ngomzuzu, wabamba isandla, wathintela, kwaye wazive ukhuselwe kwaye unqwenela, kuba wayesondele. Ngaloo ndlela, kwakhona uya kukuxelela ukuba ufuna wena. Ukuthintela kwakhe, ukunyamezela, ukunyamekela konke oku kukufanele kukukhumbuze oko akuthandayo. Akukuhle kakhulu ukuchukumisa umntu ongenamdla kuwe, kwaye nokuba ubambe isandla sakho sonke ukuhlwa, njengokuba kwenziwe ngegolide.
Akunandaba nokuba isipho siza kuhlawula njani, into eyona nto kukuba unika umqondiso wokuqwalasela, kwaye lelinye igama eliyithandayo, kuphela "kulwimi loluntu" kuphela.
Kodwa konke oku kubonakala ngathi kuyintambo efaniswa nantoni ebomini bakhe ohlala kuyo. Ukuba uthetha kubantu bakhe abasondeleyo, bahlobo, unikeza izihluthulelo kwindlu ekuthiwa uyayithanda. Utshela ngomsebenzi, uhambela imibukiso kunye, ungasuki kude nawe-ezininzi iinkalo zobomi owamthandayo owamkela kuwe, ngakumbi ekuthandayo. I-theorem elula, akunjalo? Ukuba kuphela yena akazange abe yinto engathandekiyo.
Kutheni abantu bephatha kakubi amantombazana abo?
Imikhwa embi yabantu
Yintoni okufanele ibe yindoda elungileyo?
Yintoni amadoda afuna ukuva kubafazi?
Indlela yokuziphatha nomntu, ukuba ungumphathi?
Luhlobo luni lomntu ofanelekelayo?
Ukutya kwabantwana kwiimbiza
I-pie kunye neTyhuna
Ubugcisa bokuzalwa kwakhona: indlela yokudala umfanekiso ochanekileyo ngoncedo lwezinto zokugqoka
Ukuhlamba umzimba ngomhlonyane
Bellflower - Iziza
Indlela yokotyuwa ngamakhowe ebusika ngendlela ebanda kunye neyoshisayo: zokupheka ezilula
Indlela yokubhalisa i-imeyile?
Ziziphi iziqhamo ezinokubaluleka kakhulu ubuhle
Ukukhanya kobuGcisa: iigrafu zeeFlolies zeGrisogono